ပြိုင်ဘက်အဖြစ်နဲ့ ပြင်သစ်အသင်းကို ပြန်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် အွန်နရီ Henry
8 Jul 2018 . 4:29 PM
နိုင်ငံရေးလောကမှာ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေမရှိ၊ အမြဲတမ်း ရန်သူမရှိ”ဆိုတာပါ။ ဒီစကားက အားကစားလောကနဲ့လည်း သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။ နည်းပြပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကစားသမားပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းကို ပြိုင်ဘက်အဖြစ် ပြန်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက မနည်းမနောပါ။ အခု ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အွန်နရီ Henry လည်း အဲဒီအနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းနဲ့အတူ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၀၀ ဖလားတွေ ရယူခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်ခဲ့သူ အွန်နရီဟာ အခု အင်္ဂါနေ့ကျရင် သူ့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံ အသင်းကို ပြိုင်ဘက်အဖြစ် ပြန်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အွန်နရီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းနည်းပြမာတီနက်ဇ် Martinez ရဲ့ လက်ထောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေလို့ပါပဲ။ အွန်နရီဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းလက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး နည်းပြလောကကို ခြေစုံပစ်ဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ၁၉၉၇ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့တဲ့ အွန်နရီဟာ အခုဆိုရင် သူ့နိုင်ငံအသင်းကို ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာ မာတီနက်ဇ်ကို အကြံပေးရတော့မှာပါ။ အဲဒီအတွက် အွန်နရီတစ်ယောက် ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီသသူတစ်ဦးဆိုတာ ခံစားချက်တွေ ခဏဘေးဖယ်ပြီး ကိုယ့်လက်ရှိနေရာမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ အဓိက အာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လာမယ့်ပွဲမှာသာ ဘယ်လ်ဂျီယံအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အွန်နရီတစ်ယောက် အောင်ပွဲခံမှာလား၊ ၀မ်းနည်းနေမှာလားဆိုတာကတော့ . . . .
ပွိုငျဘကျအဖွဈနဲ့ ပွငျသဈအသငျးကို ပွနျရငျဆိုငျရတော့မယျ့ အှနျနရီ Henry
နိုငျငံရေးလောကမှာ စကားတဈခှနျးရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ “အမွဲတမျး မိတျဆှမေရှိ၊ အမွဲတမျး ရနျသူမရှိ”ဆိုတာပါ။ ဒီစကားက အားကစားလောကနဲ့လညျး သကျဆိုငျမှုရှိတယျလို့ ဆိုရမလားပဲ။ နညျးပွပဲဖွဈဖွဈ၊ ကစားသမားပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျအောငျမွငျမှုရခဲ့တဲ့အသငျးတဈသငျးကို ပွိုငျဘကျအဖွဈ ပွနျရငျဆိုငျရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေ မနညျးမနောပါ။ အခု ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အှနျနရီ Henry လညျး အဲဒီအနအေထားနဲ့ ရငျဆိုငျရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈအသငျးနဲ့အတူ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို-၂၀၀၀ ဖလားတှေ ရယူခဲ့ပွီး ပွငျသဈပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးဖွဈခဲ့သူ အှနျနရီဟာ အခု အင်ျဂါနကေ့ရြငျ သူ့ရဲ့မိခငျနိုငျငံ အသငျးကို ပွိုငျဘကျအဖွဈ ပွနျရငျဆိုငျရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အှနျနရီဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးနညျးပွမာတီနကျဇျ Martinez ရဲ့ လကျထောကျအဖွဈ ဆောငျရှကျနလေို့ပါပဲ။ အှနျနရီဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈကတညျးက ဘယျလျဂြီယံအသငျးလကျထောကျနညျးပွအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ပွီး နညျးပွလောကကို ခွစေုံပဈဝငျဖို့ ပွငျဆငျနသေူလညျးဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ၁၉၉၇ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့တဲ့ အှနျနရီဟာ အခုဆိုရငျ သူ့နိုငျငံအသငျးကို ဘယျလိုအနိုငျယူမလဲဆိုတာ မာတီနကျဇျကို အကွံပေးရတော့မှာပါ။ အဲဒီအတှကျ အှနျနရီတဈယောကျ ဘယျလိုခံစားနရေမလဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ပရျောဖကျရှငျနယျပီသသူတဈဦးဆိုတာ ခံစားခကျြတှေ ခဏဘေးဖယျပွီး ကိုယျ့လကျရှိနရောမှာ အောငျမွငျမှုရဖို့ အဓိက အာရုံစိုကျရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ လာမယျ့ပှဲမှာသာ ဘယျလျဂြီယံအနိုငျရခဲ့မယျဆိုရငျ အှနျနရီတဈယောကျ အောငျပှဲခံမှာလား၊ ဝမျးနညျးနမှောလားဆိုတာကတော့ . . . .